SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Chelsea vs Arsenal ka hor kulankooda habeen dambe Final-ka Europa League… (Gunners oo xiddigaha ugu badan ku leh) – Gool FM
Haaruun May 28, 2019
(London) 28 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa habeen dambe Magaalada Baku kula ciyaari doonta naadiga Arsenal kulanka Final-ka tartanka Uefa Europa League.
Inkastoo kulanka Arbacada ee Europa League uu muhiim u yahay labada kooxoodba haddana waxa uu saa’id muhiim ugu yahay kooxda Arsenal.
Gunners ayaa sida ay haatan wax yihiin seegeysa Champions League xilli ciyaareedka danbe kaddib markii ay kaalinta shanaad ku dhameysteen horyaalka Premier League, taasoo ka dhigan in kooxda Unai Emery ay u baahan tahay inay qaado koobka Europa League si ay u hesho booskeeda Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda.
Dhanka kale Chelsea ayaa u soo baxay Champions League maadaama ay kaalinta saddexaad ee horyaalka ay ku dhameysteen haddana natiijada kulanka finalka Europa League waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dheriga ay galayaan isku aadka wareegga guruubyada, si ay uga soo muuqdaan dheriga koowaad ee UCL waxaa waajib ku ah Blues inay hantaan Europa League.
Haddaba Shabakadda ciyaaraha ee Sporsmole ayaa shax isku dhaf ah ka sameeyay kooxaha Chelsea iyo ka hor kulankooda habeen dambe ee Final-ka Europa League.
Gunners ayaana xiddigaha ugu badan laga siiyay shaxdan isku dhafka ah, waxaana ay ku leedahay lix ciyaaryahan, halka Blues ay ku leedahay 5 xiddig.
RASMI: Xavi Hernandez oo loo magacaabay macallinka cusub ee Kooxda Al Sadd